विप्लव नेकपाको बन्दका कारण जनजीवनमा सामान्य प्रभाव
काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले आह्वान गरेको बन्दका कारण काठमाडौँसहित देशका केही क्षेत्रको जनजीवन प्रभावित भएको छ । विप्लव नेकपाले केन्द्रीय सदस्य तथा काठमाडौँ उत्पयका इन्चार्ज माइला लामा पक्राउको विरोधमा बागमती, नारायण र जनकपुर (रामेछापा र दोलखा) मा बन्द बु...
काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजन भएर गएका स्थानीय तहका कर्मचारीलाई हाजिर गराउन निर्देशन दिएको छ । समायोजन भएर गएका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा हाजिर गर्न नदिएपछि मन्त्रालयले हाजिर गराउन निर्देशन दिएको हो । मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम अधिकारीले कतिपय स्थानीय तहले...
बाढीपहिरोको क्षति विवरण संकलनमा सकस
नारायण ढुङ्गाना काठमाडौं । अविरल वर्षाका कारण असार र साउनमा आएको बाढी, पहिरो र डुबानबाट मुलुकको ६७ जिल्लाले ठूलो विपद्को सामना गर्नुपर्‍यो । वर्षासँगैको बाढीपहिरो र डुबानबाट ११७ जनाको ज्यान गयो । झण्डै एक लाख परिवार प्रभावित भए । विपद् आएको २० दिन पुग्दा पनि क्षतिको विवरण संकलन हुन स...
साउनमा शाकाहारी : यस्ता छन् शाकाहारी भोजनको फाइदा
काठमाडौं । साउन महिनासँग शुद्धता पनि जोडिएको छ । धर्मकर्म एवं भक्तिभावमा मन लगाउने, शुद्ध खानपान गर्ने, उपवास बस्ने महिना हो यो । मध्य वर्षायामको यो समयमा हामीले खानपानमा सर्तकता अपनाएर कतिपय संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ । त्यसो त साउन महिनामा धेरैले माछामासु खान छाड्छन् । मदिरापान गर्दैनन् । बर्षदिनमा...
एकै प्रकृतिका दुई आत्महत्या र बढ्दो भ्रष्टाचार !
घटना नं -१ : नेपालकै पहिलो र पुरानो विश्‍वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा रहेको त्रिवि सेवा आयोगमा कर्मचारी भर्नाका लागि लिइएको परीक्षामा अनियमितता भएको समाचार सार्वजनिक भयो । त्यसको लागि छानबिन सुरु भयो । छानबिनकै क्रममा आर्थिक प्रलोभनमा परी त्रिविकै कर्मचारीको संलग्‍नता भएको पाइयो ।&nbsp...
फरार रहेका क्लब डेजाभूका सञ्चालक श्रेष्ठ विमानस्थलबाट पक्राउ
काठमाडौं - काठमाडौंको दरबारमार्गस्थित क्लब डेजाभूका अध्यक्ष मनोज श्रेष्ठ पक्राउ परेका छन्। इन्टरपोलबाट डिफ्युजन नोटिस जारी भएपछि श्रेष्ठको खोजी प्रहरीले तीब्र रुपमा गरिहेका थियो। उनी त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट आइतबार पक्राउ परेको आज सार्वजनिक गरिएको छ । महानगरीय प्रहरी परिसरका प्रमुख...
काठमाडौंमा युवतीलाई लक्षित गर्दै तीन तले घरमा गोली प्रहार !
काठमाडौं । काठमाडौंको कलंकीमा पूर्वउपसचिवको छोरीमाथि लक्षित गरी कोठामै गोली प्रहार भएको छ । बाहिरबाट हानेको गोली कोठाको जालीबाट भित्र छिरेको भए पनि उनीमाथि भने नलागेको प्रहरीले जनाएको छ । गएराति काठमाडौंको कलंकीमाई मन्दिरस्थित सामाजिक मार्गमा रहेको पूर्वउपसचिव विष्णुप्रसाद शर्माको घरमा गोली प्रहार भ...
४७ स्थान रिक्त, सरकारको बेवास्ताका कारण उपनिर्वाचन अन्योलमा
काठमाडौं । सरकारको वेवास्ताका कारण जनप्रतिनिधि रिक्त रहेका ४७ स्थानमा गर्नुपर्ने उपनिर्वाचनको प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ । निर्वाचन आयोगले आगामी कार्तिक तेस्रो सातादेखि मंसिर पहिलो सातासम्ममा निर्वाचन गर्ने गरी तयारी अघि बढाएपनि सरकारले आवश्यक समन्वय नगर्दा मिति घोषणामा ढिलाई भएको हो । आयोगले निर्वा...
डेढ वर्षमै सर्वोच्‍चमा प्रदेश सरकारविरुद्ध ३१ मुद्दा
विराटनगर । गठन भएको डेढ वर्षमै प्रदेश सरकारविरुद्ध ३१ मुद्दा परेका छन् । सडक, विद्यालय व्यवस्थापन, क्रसर उद्योग, शिक्षा, कर, जग्गा, लोकमार्ग, कर्मचारी सरुवा, स्थानीय तहमा शिक्षक नियुक्ति, सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सर्वोच्चलगायत अदालतमा मुद्दा परेका हुन् । मुद्दाको प्रतिरक्षाका लागि अ...
ब्राजिलको एक जेलमा विपक्षी समूहले आगजनी गर्दा ५२ जनाको मृत्यु
बीबीसी । ब्राजीलको पारा राज्यस्थित जेलम दंगा हुँदा ५२ जनाको मृत्यु भएको छ । अधिकारीहरुका अनुसार उक्त राज्यमा रहेको अल्तमिरा जेलभित्र दुई विपक्षी समूहबीच 'ग्‍याङ फाइट' हुँदा ५२ जनाको मृत्यु भएको हो । एउटा ब्लकमा रहेका ग्याङ्‍का सदस्यहरुले अर्को ब्लकमा रहेका सदस्यहरुमाथि आक्रम...
डेढ करोडभन्दा बढी तथ्यांक चोरी गर्ने अमेरिकी नागरिक पक्राउ
बीबीसी । अमेरिका र क्यानडामा व्यक्तिग विवरण समेटिएका १० करोड ६ लाख तथ्यांक चोरी भएपछि प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरेको छ । क्यापिटल वन नामक वित्तिय सेवा कम्पनी लक्षित गरिएको ह्‍याकमार्फत उक्त परिमाणमा तथ्यांक चोरी गरिएको हो । प्रहरीले सोमबार तथ्यांक चोरीमा संलग्‍न ह्‍याकरलाई...
सैन्य विमान दुर्घटना हुँदा १५ जनाको मृत्यु, १२ घाइते
पाकिस्तान । पाकिस्तानको राउलपिन्डीमा सैन्य विमान दुर्घटना हुँदा कम्तिमा पनि १५ जनाको मृत्यु भएको छ । आवासीय क्षेत्रमा दुर्घटना भएको विमानमा सवार पाँच जना चालक दलका सदस्य र १० जना सर्वसाधारणको ज्यान गएको जनाएको छ । दुर्घटनामा अन्या १२ जना घाइते भएका छन् । उक्त विमान परीक्षणका समयमा दुर्घछना...